Tonga ny Insta360 ONE R vaovao, fakantsary fihetsika vaovao miaraka amin'ny firaketana 360 | Vaovao IPhone
Manolotra ny vaovao izahay Insta360 ONE R, ny fakantsary fakantsary modular voalohany ahafahantsika mirakitra an-tsary 360 degre raha toa kosa ka manao fakan-tsary samy hafa miaraka amin'ny teknolojia Leica ho an'ny lantom-pianarana. ny fakantsary modular izay tonga hanova ny tsenan'ny fakan-tsary satria azo ampiasaina amin'ny drôna fampiasa indrindra eny an-tsena aza. Aorian'ilay fitsambikinana dia lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra momba ity Insta360 ONE R vaovao ity, ny fakantsary fakantsary modular tonga lafatra.
Araka ny hitanao tamin'ny horonantsary teo aloha, ny Insta360 dia naniry ny handeha lavitra miaraka amin'ity Insta360 ONE R, fakantsary vaovao avy amin'ilay goavambe sinoa ity. Fakan-tsary izay raha ny marina izany dia 3 ao anatin'ny iray satria amin'ny vatan'ny fakantsary tokana dia afaka a Fakantsary 360 (toy ilay hitantsika tao amin'ny Insta360 ONE X), a Fakan-tsary 4K izay manana ny mampiavaka ilay teo aloha miavaka amin'izany ny fanamafisana ny FlowState fa mandeha tsara ny marina, na a fakan-tsary miaraka amina sensor iray santimetatra ary solomaso Leica.
Ao amin'ny «body camera» dia hanana efijery azo ahodina isika Azontsika atao ny milalao mifanaraka amin'ny filantsika maka sary na maka sary amin'ny maody selfie. Plus koa azontsika atao ny milentika ny fakantsary hatramin'ny 5 metatra (ampy hampiharana snorkeling) na hiakatra hatramin'ny 30 metatra lalina aza miaraka amina tranga antsitrika izay hapetraka amin'ny volana febroary ho avy izao. Fandraisana an-tsoratra amin'ny 4K hatramin'ny 60fps na 5.7K amin'ny maody 360 mampiasa ny codec H265.
Ny toetra mampiavaka azy dia vitan'ny a Night Mode vaovao izay manatsara ny fakana horonantsary sy sary an'ny kinova Insta360 teo aloha, ny mety hifehezana ny fakantsary amin'ny alàlan'ny feontsika, na ny Auto Frame izay noho ny fanangonana horonantsary 360 dia afaka mamarana horonantsary iray amin'ny fanarahana ny lohahevitra tadiavinay. Izany rehetra izany ankoatry ny fomba iray avy eny ambony, araka ny niantsoan'izy ireo azy. Fitaovana manampy antsika hametraka ity Insta360 vaovao ity a Mavic Pro na amin'ny Mavic 2. Safidy tsara hanomezana safidy bebe kokoa ny drôna.
Ny zava-drehetra dia misy vidiny, ary mazava ho azy fa tsy maintsy jerentsika fa amin'ity tranga ity dia maka fakantsary roa isika amin'ny vidin'ny iray. Ity vaovao Insta360 ONE R manana vidiny, ao aminy Kambana, avy amin'ny € 509,99; raha mila ny fakana sary amin'ny sensor iray-inch (tsy misy fakan-tsary 360) dia tsy maintsy mandoa € 599,99 (na € 339,99 ho an'ny kinova 4K tsy misy 360). Vidiny azo ekena izay mahatonga fonosana mahaliana sasany satria azo ampifanarahana amin'ny filantsika. Ny zavatra tsara indrindra dia satria araka ny nolazainay fa momba ny vatan'ny fakantsary tokana izay azo ampiarahana amin'ireo fakan-tsary marobe atolotry ny tovolahy ao amin'ny Insta360 ho antsika: fakan-tsary 360, fakan-tsary 4K, fakan-tsarimihetsika 1-inch ary solomaso Leica. Safidy tsara dinihina ho an'izay mitady fakan-tsary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Tonga ny Insta360 ONE R vaovao, ny fakantsary fihetsika vaovao miaraka amina rakipeo 360